मोबाइल फोन एक्कासी बन्द भएमा के गर्ने ? जान्नै पर्ने यी ४ कुरा - inaruwaonline.com
मोबाइल फोन एक्कासी बन्द भएमा के गर्ने ? जान्नै पर्ने यी ४ कुरा
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १४, २०७४ समय: ११:०५:५०
एजेन्सी । स्मार्टफोनमा सानो सानो समस्याले पनि कहिलेकाही हामीलाई दुख दिईरहेको हुन्छ । कहिलेकाही मोबाइलमा केहि समस्या आउन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा मोबाइल कुनै पसलमा बनाउन लानु बन्दा पनि घरमै बसेर बनाउने प्रयास गर्न सकिन्छ । आज हामीले स्मार्ट फोनमा हुने केहि समस्या तपाइँ आफैले समाधान गर्न सक्नुस भन्ने हेतुले यो जानकारी दिएका छौं तल पढ्नुस:
फोन एक्कासी बन्द भएमा….
कहिलेकाहि नयाँ वा पुरानो फोन एक्कासी बन्द हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उक्त मोबाइललाई प्लास्टिकले बेरेर फ्रीज भित्र हालेर केहि समय पछी फोन अन गर्न सकिन्छ । स्मार्टफोनको ब्याट्री लिथियम आयनबाट बनेको हुन्छ । तातो भएपछी यसले एक्कासी काम गर्न छाड्छ । त्यसैले कुल फ्रिजमा फोन राख्दा ब्याट्री पुरानै अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ । तर फ्रीजमा राख्दा फोनलाई राम्ररी प्लास्टिकले बेरेर राख्नुस नत्र फोन भिजन सक्छ । साथै १/२ घण्टा भन्दा धेरै बेर नराख्नुस ।
फोन पानीमा भिजेमा …
फोन भिजेको छ भने तुरुन्त स्विच अन नगर्नुस् । साथै भिजेर पनि फोन खुलै छ भने स्विच अफ गर्नुस । यस्तो गर्दा फोनमा बिद्युत सर्ट हुन पाउंदैन । यदी ब्याट्री निकाल्न मिल्ने फोन छ भने तत्काल निकाल्नुस साथै सिम कार्ड, स्क्रीन गार्ड, मेमोरी कार्ड निकाल्नुस । फेरी कुनै कटनको कपडाले फोन पुछ्नुस । पुछीसके पछि फोन र ब्याट्रीलाई धान वा चामलभित्र दबाउनुस । धान वा चामलले फोनबाट छिट्टै पानि सोस्न मद्धत गर्छ । ८/१० घण्टापछी मोबाइल खोल्ने प्रयास गर्नु हुन्छ ।
फोन स्क्र्याच भएमा…
फोनको एप्लिकेशन क्र्यास भएमा वा ह्यांग भएमा…
यदि तपाइ एप्लिकेशन डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसै समय तपाइको एन्ड्रोइड फोनको एप्लिकेशन क्र्यास भएमा वा ह्यांग भएमा नआत्तिनुस । यस्तो अवस्थामा फोनको ब्याट्री निकालीदिनुस् । फेरी ब्याट्री लगाएर फोनलाई रीस्टार्ट गर्नुस । रीस्टार्ट गरेपछि गूगल प्लेमा गएर तपाईलाई चाहिएको ऐप फेरी अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ । यदी अपडेटको अप्सन नआएमा उक्त एप्लाई अनइन्स्टल गर्नुस र फेरी इन्स्टल गर्नुस । समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।साझासवालबाट साभार